Alshabaab iyo maamulka Gobolka Banaadiir oo ka hadlay Qaraxii Maanta ee magaalada Muqdisho | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Alshabaab iyo maamulka Gobolka Banaadiir oo ka hadlay Qaraxii Maanta ee...
Alshabaab iyo maamulka Gobolka Banaadiir oo ka hadlay Qaraxii Maanta ee magaalada Muqdisho
Afhayeenka Gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan ayaa sheegay in qaraxa ka dhacay Xamar Weyne ay ku geeriyoodeen Sarkaal booliis oo lagu magacaabayay C/Shakuur Xuseen Cabdi Jaabiri) iyo qof kale oo la socday.
Waxa uu sheegay Afhayeenka in qaraxa sargaalka lagu dilay uu ahaa mid gaarigiisa loogu soo xiray, waxa uuna ugu baaqay dadka in ay ka feejignaadaan halka ay dhigayaan gaadiidkooda.
Dhinaca kale War kooban oo kasoo baxay Al Shabaab ayaa lagu sheegtay masuuliyada qaraxan saakay lagu dilay sargaalka katirsanaa ciidanka booliiska Soomaaliya, waxa ayna Al Shabaab sheegeen in sargaalkaasi bartilmaameed u ahaa.
Al Shabaab ayaa inta badan sheegata qaraxyada iyo dilalka loo geesto saraakiisha iyo dadka kale ee xiriirka la leh dowlada, waxaana qaraxan saakay ka dhacay Muqdisho nuucyo lamid ah horey Al Shabaab ugu dileen saraakiil iyo dad kale oo badan.
Previous articleWar deg deg ah Dagaal Xoogan oo dhimasho iyo Dhaawac sababay oo ka socda Duleydka Muqdisho
Next articleCodad Sir ah Dowlada Fedaraalka oo loogu Baaqay in ay wax ka qabato Safaarada Soomalida Hindiya
Suuqyada Magaalada Muqdisho oo lagu kala Iibsanayo Agabkii Mucaawinada ee Karoonaha...